Ugcino lwe-Erdogan - Amalungelo oluntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 24. January 2021
Inkululeko yokuthetha isongelwa kakhulu eTurkey. Ukusukela kwilinge lobhukuqo-mbuso ngoJulayi ka-2016, urhulumente waseTurkey uthathe amanyathelo aqatha ngokuchasene neentatheli kunye namajelo eendaba agxeka urhulumente. Oku kuyenza mandundu imeko esele ixinene kumajelo eendaba eTurkey. Iincwadana zokundwendwela zeentatheli ziyathathwa, ababhali bavalelwa entolongweni. Ngaphezulu kwe-130 yezindlu zosasazo esele zivaliwe, kubandakanywa nabapapashi beencwadi abangama-29 nabo bahluthiweyo.
Uloyiko nendlela yokuziphilisa yongamele phakathi kwabavakalisi nabapapashi. ETurkey, inkululeko yokuthetha inyathelwa. Inkululeko yelizwi lilungelo lomntu kwaye ayixoxiswana. Inkululeko yoluvo, yolwazi kunye nenkululeko yamajelo eendaba sisiseko soluntu olukhululekileyo nolunedemokhrasi. Sibiza uRhulumente we-Federal kunye neKhomishoni ye-EU ukuba bathathe indawo ecacileyo kwimeko yaseTurkey, ukuba bafune ngokungaguqukiyo nangokukhutheleyo inkululeko yokuthetha kwizigqibo zabo, izenzo kunye neengxelo zabo kwaye bangenzi isifundo sokuxoxisana. Ukuba inkululeko yokuthetha ihlaselwa kwaye ithintelwe kakhulu eTurkey nakwezinye iindawo emhlabeni, uRhulumente we-Federal kunye neKhomishini ye-EU kufuneka bahlole umgaqo-nkqubo wabo kumazwe anjalo. Ukongezelela, iintatheli ezichaphazelekayo kunye nababhali bafuna uncedo olukhawulezayo oluvela eJamani naseYurophu, umzekelo ngombandela ongekho phantsi kolawulo lwe-visa oluphuthumayo.
Iintatheli, ababhali nabapapashi, iincwadi, amaphephandaba kunye neemagazini zenza igalelo elibalulekileyo kwidemokhrasi nenkululeko. Yiyo loo nto sizimisele ngokungagungqiyo kwinkululeko yokuthetha, kulwazi kunye nenkululeko yamajelo eendaba. Xhasa uxwebhu lwethu lwezikhalazo kwaye uzimanye nathi kula malungelo asisiseko! Ngenxa yelizwi nenkululeko!
Izenzo zethu zigcina abeendaba bexakekile kwaye baqinisekisa ukuba le miba ibalulekileyo yoluntu ayilityalwa. Nceda wabelane ngeeprojekthi zethu kuFacebook! Ukuba uyasixhasa isizathu sethu, siya kuba nombulelo ngalo naluphi na umnikelo ukuze sikwazi ukuqhubeka namaphulo ethu ngokusisigxina. Nokuba iieuro ezimbalwa zenza umahluko! Ukwabelana kukukhathala. Nceda uxhase umsebenzi wethu wesisa.
Iphulo le "Demokhrasi engakumbi" eTurkey Oktobha 25th, 2021Oliver Bienkowski